Axmed Madoobe oo ka soo horjeestay go’aankii Madasha Xildhibaanada ay ku fasaxeen | Baydhabo Online
Axmed Madoobe oo ka soo horjeestay go’aankii Madasha Xildhibaanada ay ku fasaxeen
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, ayaa ka soo hor jeestay go’aankii Xubnaha Madasha Wadatashiga Qaran ay horay ugu fasaxeen 6 Xildhibaan, islamarkaana ay u amreen in dib loogu laabto 5 Kursi Doorashadooda.
Axmed Madoobe ayaa sheegay go’aankaasi inaysan aqbaleyn Maamulka Jubbaland, islamarkaana go’aan qaldan uu yahay, xilligii Madasha ay gaarayeena uusan ku sugnayn gobtaasi.
Madaxweynahu wuxuu dhaliilay go’aankaas oo uu xusay in qaar ka mid ah kuraastii la laalay la fasaxay halka dhawr kursi oo la soo celiyay la kala qaybsaday wuxuu Nasiib daro ku tilmaamay in danbi dad ay galeen la kala qaybiyo oo kuraas kale lagu dabaqo.
“Waa arin qalad ah oo aan ka soo horjeedno, sababtoo ah Dambi dad ay wada galeen hadii la kala qaybiyo oo la dhaho qole hebel waa fasax qolada kalena lagu celiyo waa dhibaato waana ka soo horjeedna Jubbaland hadii aan nahay.” Ayuu yiri Axmed Madoobe.
Inkastoo go’aanka madasha ay ku gaareen arintaasi uusan hada aheyn, hadana waxaa xusid mudan in Madaxweynaha Jubbaland uu noqonaayo shaqsigii ugu horeeyay ee Madaxweyne Maamul Goboleed ah oo go’aankaasi ka soo horjeesta.
Madasha Wadatashiga Qaran, inkastoo hada aysan laheyn awoodo ku aadan go’aan ka gaarista Marxalada Siyaasada dalka, maadaama dalka ay leeyihiin Xildhibaano go’aan gaaraya ayaa hadana Madasha waxaa lagu eedeeyay inay gaartay go’aano danahooda gaarka ah ku jira.